‘थरुहट’ मुद्दा बोकेको रुक्मिणी पार्टीलाई थारुहरुले पत्याएनन् !
रुक्मिणी चौधरी नेतृत्वको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटले प्रतिनिधि सभातर्फको ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड र प्रदेशसभातर्फको १.५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड ल्याउन सकेन। जसका कारण पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिकतर्फ सिट ल्याएको यो पार्टी पाँच वर्षसम्म अस्तित्वविहीन बन्ने भएको छ। थरुहटको मुद्दा बोकेको यो पार्टीले थारुहरुको भोट पाउने आशा राखेको थियो। पार्टीकी अध्यक्ष रुक्मिणी चौधरीले पनि २० लाख थारुमध्ये ३ लाख थारुले कसो भोट नदेलान् भन्दै चुनावी अभियानमा लागेको बताएकी थिइन्। तर अन्तिम मपरिणामअनुसार रुक्मिणीको पार्टीले प्रतिनिधिसभातर्फ १४ हजार ४८९ मत ल्याए। त्यस्तै २ प्रदेशमा ३८९६, ५ प्रदेशमा ५२४७ र ७ प्रदेशमा १४७० मत ल्याए। जुन मत खसेको मतभन्दा धेरै न्युन हो। पिहलो...Read More
प्रकाशित : पौष ७, २०७४ | १८३ पटक हेरिएकोसमाचार
को हुन् एमालेबाट समानुपातिक सांसद बन्ने दुई भाग्यमानी पुरुष र ३९ महिला नामसहित
काठमाडौँ । एमालेले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा समानूपातिकतर्फ पार्टीका तर्फबाट सांसद बन्नेको नामावली निर्वाचन आयोगका बुझाउने तयारी गरेको छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ अधिकांश पुरुषले जितेका कारण एमालेले समानूपातिकतर्फ ठूलो संख्यामा महिलालाई सांसद बनाउँदैछ। एमालेले समानूपातिकतर्फ ४१ सिट जितेको छ । एमाले उच्च स्रोतका अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्षमा ८० सिट जितेकाले समानुपातिकतर्फ जम्मा दुईजना पुरुषलाई सांसद बनाउने गरी आयोगमा नामावली बुझाउन लागेको हो। प्रत्यक्षमा जम्मा दुर्इजना महिलाले एमालेबाट चुनाव जितेका छन्। एमालेले खस आर्य समूहबाट स्थायी समिति सदस्य मुकुन्द न्यौपाने र पिछडिएको क्षेत्रबाट मोहन बानियाँलाई समानूपातिकबाट सांसद बनाउँदैछ। एमालेले ३९ जना महिलालाई समानूपातिकबाट सांसद बनाउँदैछ। एमालेबाट खस आर्य महिलामा राधा ज्ञवाली, विन्दा...Read More
प्रकाशित : पौष ७, २०७४ | १६० पटक हेरिएकोसमाचार
श्रीमानको यादमा रुँदै म्यादीबाट बिदा भइन् लीला, भन्छिन्- ‘मन थाम्नै सकिनँ’ –
पर्वत : पर्वतको कुश्मा नगरपालिका वडा नं. ८ चुवाकी ४७ वर्षीया लीलादेवी केसीलाई जीवनमा एउटै धोको थियो, आफ्नो श्रीमानले छाडेर गएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने। उनी चाहन्थिन्, प्रहरी बनेर देशलाई थोरै भने पनि योगदान दिन सकुँ। तर, उमेरका कारण त्यो लगभग असम्भवजस्तै थियो। यद्यपि समयले उनलाई सपना पूरा गर्ने अवसर दियो। गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी बनेर सेवा गर्ने अवसर पाइन् उनले। शुक्रबार म्यादी प्रहरीबाट बिदा हुँदै गर्दा उनका आँखाभरी आँसु छचल्किए। प्रमाणपत्र लिएर रुँदै विदा भइन् लीला। प्रहरीमा रहेका उनका श्रीमानको मुलुकमा १० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र युद्धका क्रममा मृत्यु भएको रहेछ। त्यसपछि उनलाई श्रीमानले गरेको राष्ट्रसेवाको...Read More
प्रकाशित : पौष ७, २०७४ | १७५ पटक हेरिएकोसमाचार
वामदेव गौतम जो आफू हारे श्रीमतीलाई सांसद बनाइछाडे , एमालेमा कुन कुन नेताले बनाए श्रीमतीलाई सांसद ?
काठमाडौँ – नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पत्नीलाई समानुपातिक सांसद बनाएका छन् । वामदेव गौतमकी पत्नी तुल्सी थापालाई एमालेले समानुपातिक सांसद बनाउन लागेको हो । आफू बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट पराजित भएपनि वामदेवले श्रीमतीलाई सांसद बनाइछाडेका हुन् । यसअघि मधेसी दलले श्रीमतीलाई सांसद बनाउने गरेकोमा यसपटक प्रमुख दलमा समेत यो प्रचलन देखिएको छ । वामदेवकी पत्नी तुल्सी जनजाति महिलाबाट सांसद बन्ने पक्का भएको हो । एमालेले उनीसहित ११ जना महिलालाई जनजातितर्फ सांसद बनाउन लागेको हो । यसमा प्रदेश सांसद शंकर पोखरेलकी श्रीमती सुजिता शाक्य समेत सांसद बन्ने भएकी छन् । यसपटक एमालेमा वामदेव र शंकरलाई पत्नीलाई समेत सांसद बनाउने...Read More
प्रकाशित : पौष ७, २०७४ | ७३ पटक हेरिएकोसमाचार
दाङ भर्सेस बुटवलः वाम गठबन्धनमा खतरनाक मतभेद, यस्तो छ अंकगणित, कसरी तोकिन्छ राजधानी ?
पुस ७, काठमाडौं । प्रदेश ५ को राजधानीलाई लिएर वाम गठबन्धनका नेताहरु दुई खेमामा विभाजित देखिएका छन् । यो प्रदेशमा गठबन्धनको दुई तिहाई पुग्ने देखिन्छ र एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री पक्काजस्तै छ । तर, प्रदेशको राजधानी दाङलाई बनाउने कि बुटवल भन्ने बहसमा वाम गठबन्धनका नेताहरु दुई धारमा देखिएका छन् । भावी मुख्यमन्त्री पोखरेल दाङका हुन् र उनी दाङलाई नै प्रदेशको राजधानी बनाउने सोचमा छन् । त्यसतर्फ संकेत गर्दै एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले भनेका छन्, बुटवलबाहेक अन्यथा निर्णय हुने सुनिएको छ, यसोभए हामी सडकमा उत्रिन्छौं ।’ विभाजित वाम गठबन्धन बुटवलका एमाले उपमहासचिव पौडेल अखण्ड लुम्बिनीको माग गर्दै भएको...Read More